Burma Strange News (Burmese Version): မြန်မာ အစိုးရ နျူကလီးယား မလုပ်ဘဲ နို့စည်ခွက်တွေ လုပ်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း IAEA အကြီးအကဲဟောင်းက ပြောကြား
မြန်မာ အစိုးရ နျူကလီးယား မလုပ်ဘဲ နို့စည်ခွက်တွေ လုပ်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း IAEA အကြီးအကဲဟောင်းက ပြောကြား
Burma's Nuclear Reactor
ကုလ သမဂ္ဂ နျူကလီးယား အရာရှိကြီး ဟောင်း ဖြစ်သူ Olli Heinonen က မြန်မာ အစိုးရဟာ အဏုမြူဗုံး ထုတ်လုပ်ဖို့ နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖို လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘဲ မြေကြီးထဲက တူးယူရရှိတဲ့ ယူရေနီယမ် တွေကို ထမင်းပေါင်းအိုးထဲ (သို့မဟုတ်) နို့စည်ခွက်ထဲ ထည့်ကြည့်ပြီး ထောပတ်ထမင်း ချက်စားဖို့ ပြင်ဆင် နေတာသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ လောလောဆယ်မှာတော့ ထောပတ်ထမင်းထဲ ထည့်ဖို့ ဆိတ်နို့ နွားနို့များ ကြိုချက်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်းနဲ့၊ ဆိတ်နို့ နွားနို့တွေ ထည့်ဖို့ နို့စည်ခွက်များ ထုတ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲ အခြေအနေမှာပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ကြောင်း ရိုက်တာ သတင်းမှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။
သတင်းအပြည့်အစုံကို ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ရိုက်တာ သတင်းမှာ ဖတ်ပါ
Posted by BS News at 2:18 AM
အနုမြူသိပ္ပံပညာရှင် Robert Kelley ကတော့ မြန်မာ့ နျူကလီးယား ထုတ်လုပ်ရေး ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့.. သူတို့အိမ်က ရေပိုက် ပြင်သမားတောင် ဒီထက်ကောင်းအောင် လုပ်တတ်ပါတယ်လို့ မှတ်ချက် ပြုထားပါ တယ် ....
"Some of the machines they've been making or some of the products they've been making are very crude, probably because they haven't been having outside help. There's one item that'saburning chamber that has two pipes coming out of it," she said. "Bob [Robert Kelley] remarked to me that his plumber could have doneabetter job than that. I mean it is very crude welding." အောက်မှာ ဖတ်ပါ...
ဂီရိမုန်တိုင်းသင့် ငှက်များကို မြန်မာ NGO အဖွဲ့တစ်...
တာဝတိံသာကို အစိုးရသော သကြားမင်း အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ေ...
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့် ဖိုးသူတော် ၀တ်လျက်ရှိ
အင်တာနက်ဆိုင်အတွင်း ချိန်ကိုက်မိုင်း ထားသွားသည်ဟုသ...
၀တီးမြို့ဟောင်းတူးဖော်မှုမှ အငြင်းပွားဖွယ် ရှေးဟောင...
တာမွေမြို့နယ်တွင် ဘုန်းကြီးတစ်ပါး၏ သပိတ်အတွင်းမှေ...
ငမိုးရိပ်ချောင်းအတွင်း သွားလာနေသော မှော်မီးကျောင်း...
မစ္စတာ နံပြား ရန်ကုန်ရောက်ရှိ
အားကစား သမားဆိုတာ ဘီစကစ်မုန့်စားဖို့ကလွဲလို့ တိုင်...
ဂျူမုံ ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဖမ်းဆီးခံရ
မိုးပေါ်က ကျတာ မဟုတ်ကြောင်း အမှန်တရား ဖော်ထုတ်တဲ့ ဂ...
ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည့် ဂုဏ်ယူဖွယ် မြန်...
ထူးဆန်းသော ရေသူထီး ရန်ကုန်မြို့ပေါ်သို့ ရောက်ရှိလြာ...
မြန်မာနိုင်ငံမှ ခရီးသည်တင် လေယာဉ်အချို့ ပျံသန်းနေယ...
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် နှာခေါင်းမပါသည့် ထူးဆန်...
Burma Strange News ဆိုသည်မှာ
ကျွဲနွားများ မကြာမီ Life-Jacket ၀တ်ဆင်ရတော့မည်။
Breaking News: ရွှေတိဂုံဘုရား မြောက်ဖက်မုခ်မှ ခြင်္သေ...
ရန်ကုန်တွင် ကိုးရီးယား ဇာတ်ကား ဗီစီဒီခွေများ အဆမတန...
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် မြန်မာများ မြင်းစီးလျ...
ဘုရားကိုသေနတ်ဖြင့်ပစ်မှု မကွေးမြို့တွင် ဖြစ်ပွား၊ေ...
ကိုထိန်လင်း၏ ရင်ဘတ်ပေါ်မှ သရဲလေးကို မြင်ရ၍ ရန်ကုန်ေ...
နျူကလီးယားလက်နက်များ စူပါမားကက် နှင့် စတိုးဆိုင်မျ...
ရန်ကုန်နှင့် ကူမင်း ဆက်သွယ်မည့် ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး ရထာ...
အလံခိုးမှု ကမ္ဘာ့တရားရုံး ဆုံးဖြတ်
ရန်ကုန်သို့ ဘီလူးများ ရောက်နေ
ကိုအေးလွင်အမှု တရားရုံးက စစ်ဆေးလျက်ရှိ
ဆင်ဖြူတွေ့သော်လည်း မဖမ်းဆီးရန် ညွှန်ကြားထား
ဘန်ကောက်မြို့ကို အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက သိမ်းပိုက်နို...
မြန်မာ အစိုးရ နျူကလီးယား မလုပ်ဘဲ နို့စည်ခွက်တွေ လု...
မြန်မာနိုင်ငံ၊ လက်ရှိ သမ္မတ နှင့် အင်တာဗျူး
မြန်မာ့ အကောင်းဆုံး နောက်တန်း ခံစစ်မှူး
မြန်မာ ယောက်ျား ပြည့်တန်ဆာ နှစ်ယောက် အကြောင်း
ကမ္ဘာ့အထူးဆန်းဆုံး တိုင်းပြည် = မြန်မာပြည်
ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ဆုံးသတင်းများ အင်တာနက် စာမျက်နှာ...
ကျော်သူ သရဲတွေ မွေးမြူထား